Mukunda Acharya Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Mukunda Acharya
लघुकथा : हिरो
~मुकुन्द आचार्य~ काठमाडौंको चिसोमा जाँड नखाने त कमै पाइन्छन् । तर जाँड खाएर भाँडभैलो गर्ने पनि कमै हुन्छन् । भातको माँडको साटो जाँड खाने साहसी गोर्खाली पनि कम्ता हुँदैनन् । बिहानैदेखि टिल्ल भएर फतफताइरहने एउटा यस्तै चरित्र हाम्रो समाजमा ‘ट्वाँके’ … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : जय होस् !
~मुकुन्द आचार्य~ बिहार भारतका एक नामूद पाकेटमारले आफ्नी पत्नीलाई मीठो पारामा फकाए– “लौ यी गहनाहरू राम्ररी राख । यी सबै गहना तिम्रै लागि हुन् । गहनाको पोको राम्ररी राख ।” बिचरी पत्नी द· परिन् । उनको खुशी र आश्चर्यमिश्रित स्वर … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : प्रहरी पुरस्कार समारोह
~मुकुन्द आचार्य~ भव्य समारोहको आयोजना थियो । राम्रो व्यवस्था–राम्रो जनसहभागिता । थुप्रै प्रहरीहरू पुरस्कृत र सम्मानित भए । सर्वत्र खुशी, उम·, उत्साह छरिएको थियो । अनेकौं चम्चाहरू सहयोगमा सक्रिय थिए । दर्शकदीर्घामा बसेको दश वर्षीय बालकले सोध्यो–“डैड १ यी प्रहरीहरूलाई … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : बौलाहा घडी
~मुकुन्द आचार्य~ ‘हजूर उठिसियोस् न ! ’त्यति भनेर श्रीमतीले चियाको कप ठ्यास्स राखिन् । श्रीमान् चैं अझ पनि ओछ्यानमा लडिबुडी गर्दै थिए । श्रीमतीले पुनः कराएपछि श्रीमान्को तन्द्रा भङ्ग भयो । एउटा हातले आँखा मिच्दै र अर्को हातले आफूलाई व्यवस्थित … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →